ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု | USAHello ထံမှကျန်းမာရေးနှင့်စိတ်ကျန်းမာရေးအကြောင်းသတင်းအချက်အလက် | USAHello
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌, သင်ဆရာဝန်ကိုသွားပိုက်ဆံပေးချေရန်ရှိသည်. ကနျြးမာရေးအာမခံသင်ဆရာဝန်ကိုသွားသည့်အခါသင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက်ပေးဆပ်ကူညီပေးသည်. ဆက်ဖတ်ရန်
ဆရာဝန်ကိုသွား, သငျသညျဆရာဝန်တစ်ဦးကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်ရက်ချိန်းရန်ရှိသည်။ ဆက်ဖတ်ရန်
ဆရာဝန်များကအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောမျိုးရှိပါတယ်. ကလေးများနှင့်လူကြီးများကွဲပြားခြားနားသောဆရာဝန်များကိုမြင်ရပေလိမ့်မည်။ ဆက်ဖတ်ရန်
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌, ဆေးဝါးများနှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများရှိပါတယ်. သင်ကစတိုးဆိုင်မှာအချို့သောဆေးဝါးများဝယ်နိုင်. သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံ, ဆရာဝန်တစ်ဦးသင်သည်သင်၏ဆေးပညာပေးရပါမည်။ ဆက်ဖတ်ရန်
စိတ်ကျန်းမာရေးသငျ့စိတျ၏ကနျြးမာရေးဖြစ်ပါတယ်. သင့်ရဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးသင်ထင်နှင့်အခံစားရပုံကိုသာသက်ရောက်သည်။ ဆက်ဖတ်ရန်
သငျသညျသစ်တစ်ခုယဉ်ကျေးမှုကိုထိန်းညှိအဖြစ်, သင်ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေခံစားရဘယ်မှာကွဲပြားခြားနားသောကာလကိုဖြတ်သန်းသွားစေခြင်းငှါ. ဤအအဆင့်ဆင့်၏တစ်ဦးအဖြစ်လူသိများသည် "ယဉ်ကျေးမှုထိတ်လန့်။ " ဆက်ဖတ်ရန်
ကျား reassignment လိင်လူတို့သည်မိမိတို့ကျားသူတို့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ကိုက်ညီကူညီပေးသည်ဆိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြစ်ပါသည်. သင်သည်သင်၏ကျားကိုပြောင်းလဲလိုလျှင်, သင်ကူညီနိုင်သူတစ်ဦးအထူးကုဆရာဝန်ကိုသွားရှိစေခြင်းငှါ. ဆက်ဖတ်ရန်
တတ်နိုင်စောင့်ရှောက်မှုအက်ဥပဒေ : ဘာသာပြန်ထားသောသတင်းအချက်အလက်နှင့်ဗီဒီယိုများဒုက္ခသည်များစျေးသက်သာပြုစုစောင့်ရှောက်မှုအက်ဥပဒေကိုနားလည်ကူညီရန်ဒုက္ခသည်ဘာသာစကားများဖွံ့ဖြိုးဗီဒီယိုများနှင့်သတင်းအချက်အလက်. USAHello
တစ်ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ဖြစ်လာငါ့အိပ်မက်အချို့သောအသစ်ရောက်ရှိလာသောအဘို့, အမေရိကမှလာမယ့်သူတို့ကိုသူတို့ရဲ့အိပ်မက်တွေကိုလိုက်နာဖို့အခွင့်အလမ်းကိုပေးတော်မူ၏. တစ်ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ဖြစ်လာသူ၏ရည်မှန်းချက်အကြောင်းကိုတစ်ခုမှာမျက်နှာသစ်ဆွေးနွေးပွဲ။
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု: ဒုက္ခသည်လူနာများအားကုသဆေးရုံတစ်ရုံ၌အလွန် imporant အတွက်ဆက်သွယ်ရေး. စကားပြန်လူဝင်မှုနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကျွမ်းကျင်သူများအဘို့အကွံဉာဏျမြားပေးသည်, asylee, နှင့်ဒုက္ခသည်လူနာများအား။